Perikopa (Mg)| Page 2
Ny hafatra: Ny “fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra” dia izay manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra, dia ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiara-belona, araka ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny mpanjaka, ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny” Isa.32:1. Jesosy Kristy, Ilay Mpanjaka Mahatoky sy Marina, no ivon’izany fanjakana izany sy foto-piorenan’ny … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 31, Oktobra – 06 Novambra 2021 “Andriamanitra no Tompo” *
Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra no Tompo” dia midika fa Andriamanitra Tokana Izy, araka ny teniny manao hoe: “Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa: tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho” Isa.45:5a. Ambarany izany mba hiarovana antsika tsy hoviravirain’izay andriamanitsi-izy, izay tsy mikendry afa-tsy ny hitarika antsika ho amin’ny tsy fahamarinana mba handavo antsika ho meloka … [Read more…]
Ny hafatra: Ny hoe “Fantaro Andriamanitra” dia teny fanentanana antsika mba hahafantarantsika an’Andriamanitra marina. Fa misy ireo midify tsy mahafantatra na tsy te-hahafantatra an’Andriamanitra, ka mitondra ny fiainany araka ny fisainany sy ny sitraky ny fony ihany. Andanin’izany dia misy tokoa ireo mivavaka, saingy tsy amin’Andriamanitra Ilay nahary ny lanitra sy ny tany (Gen.1:1) no … [Read more…]
Ny hafatra: Ny hoe: “Manatòna an’Andriamanitra” dia baiko sady fitaomana izay avantan’Andriamanitra amin’ny olona rehetra. Fa maro tokoa no variana amin’ny zavatry ny tany mandalo, ka mbola vahiny ny amin’Andriamanitra sy ny fanjakany, kanefa: “Mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17. Antson’Andriamanitra miantefa indrindra koa … [Read more…]
Ny hafatra: Fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny hiray monina amin’ny olona ka namoronany azy hitovy endrika Aminy (Gen.1:26). Tafasaraka tamin’Ilay Mpahary azy anefa ny olona rehefa nandika ny didin’Andriamanitra Adama sy Eva, ka lavon’ny ota (Gen.3:6). Ary satria “fahafatesana no tambin’ny ota” Rom.6:23a , dia lasan-ko babo, ambany vahohon’ny devoly sy ny fahafatesana ny taranak’olombelona. Andriamanitra … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVIII manaraka ny Trinite 03-09 Oktobra 2021 “Matahora an’Andriamanitra” *
Ny hafatra: Ny hoe “Matahora an’Andriamanitra” dia hafatra sady baiko omen’ny Tompo antsika hampahafantarany antsika ny fomba sy ny toe-panahy izay tokony hananantsika eo amin’ny fifandraisantsika Aminy. Fa “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena” Oha.9:10a. Izany dia ny fanekena sy ny fanajàna Azy ho Tompo, ary ny fankatoavana ny Teniny ambonin’ny zavatra rehetra. Tompon’izao rehetra … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite, 26 Septambra – 02 Oktobra 2021 “Manafaka Andriamanitra” *
Ny hafatra: Nahoana no hoe “Manafaka Andriamanitra?”. Satria maro ny zioga mety mamatotra antsika olombelona. Ao ny fiainam-panahy tsy lavorary (ohatra: ny fo tsy mahalala mibebaka, ny mitebiteby lava tsy mety mino), ao ny toe-po ratsy (mankahala sy mialona ny namana, tia mamaly ratsy ny ratsy), ao ny fahazaran-dratsy (mandainga, mangalatra, manompo fieremana – fitiavana … [Read more…]
Ny hafatra: “Andriamanitra no manome fiainana”. Izany no foto-kevi-dehibe fonosin’ny asa fahariana izay ataon’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, raha voasoratra hoe: “Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary haizina no tambonin’ny lalina. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia mazava; dia … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XV manaraka ny Trinite, 12-18 Septambra 2021 “Miharia ny tena harena” *
14 septembre 2021 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Ny hafatra: Ny hoe “Miharia ny tena harena” dia manambara fa tsy tokana ny harena izay mety ho katsahintsika olombelona, ary hifikiran’ny fontsika. Fa marina indrindra ny tenin’i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: “Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao” Mat.6:21. Dia misafidy ny olona ny amin’ny harena izay katsahiny sy ifikiran’ny … [Read more…]
FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Hira sy Filazantsara Alahady XIV manaraka ny Trinite, 05 – 11 Septambra 2021 “Afaha amin’ny fanamarinan-tena” *
6 septembre 2021 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Tsy izay manamarin-tena no marina, fa izay hamarinina. Hoy Jesosy: “Raha Izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako” Jao.5:31. Tsy mahamarina ny olona ny fanamarinan-tena, fa mahameloka azy eo imason’Andriamanitra, ary sakana tsy hidirany ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, izany hoe mahavery azy. Ny ilaina dia ny fanamarinan’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe: … [Read more…]
« Précédent 1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 Suivant »